सुझाव चयन गर्न प्रोसेसर लागि केही ठंडा
हरेक वर्ष कम्प्युटर उपकरण र सामान बढी र थप नयाँ मोडेल छन्। तथापि, खेतमा शक्ति र उच्च-प्रदर्शन उच्च प्रविधी नेताहरूको पछि लाग्नुलाई मा regularities को समस्या संग सामना गर्दै छन्। प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड र प्रक्रिया अन्य विवरण गर्मी मा परिवर्तित र सिस्टम एकाइ को तात्दै योगदान छ जो ऊर्जा, उत्पन्न। यो, बारी मा, बारम्बार सिस्टम असफल र breakdowns entails। स्थिति को उपज - को ठंडा सिस्टम को स्थापना।
प्रोसेसर ठंडा प्रणाली प्रकार
गुणस्तर प्रणाली कम्प्यूटर ठंडा मात्र देखिने ब्रान्ड नयाँ भागहरु को विफलता जोगिन छैन, तर पनि गति, ढिलाइ र निरन्तरता को कमी प्रदान गर्नेछ।
तरल, निष्क्रिय र हावा: मिति, ठंडा प्रणाली सीपीयू त्यहाँ तीन प्रकारका छन्। निम्न लाभ र प्रत्येक समाधान को बेफाइदा छन्।
धेरै अगाडि हेर्दै हामी ठंडा को सबै भन्दा साधारण प्रकार टाढा हावा हो भनेर भन्न सकिन्छ, कि छ। यस कूलर को ई स्थापना, सबै भन्दा कुशल तरल जबकि। प्रोसेसर लागि ठंडा हावा हदसम्म वफादार मूल्य निर्धारण नीति धन्यवाद जित्छ। लेख मा एक उपयुक्त प्रशंसक चयन को मुद्दा विशेष ध्यान दिइनेछ किन छ।
तरल ठंडा प्रणाली (पानी ठंडा) तात्दै र सम्बन्धित प्रक्रिया breakdowns बच्न सबैभन्दा उत्पादक विधि प्रोसेसर छ। प्रणाली डिजाइन को reminiscent छ फ्रिज एकाइ र हुन्छन्:
गर्मी एक्सचेंजर, प्रोसेसर द्वारा उत्पन्न गर्मी अवशोषित;
पम्प जो तरल लागि जलाशय रूपमा कार्य;
गर्मी एक्सचेंजर सञ्चालन समयमा थप कन्टेनर विस्तार;
कूलेंट - एक तत्व एक विशेष तरल वा distilled पानी सम्पूर्ण प्रणाली भरिन्छ जो;
गर्मी डुब्नु तत्व गर्मी उत्पादन कि;
Hoses जो पानी पासेसहरू र धेरै एडेप्टर मार्फत।
प्रोसेसर को पानी ठंडा को विधि को लाभ उच्च दक्षता र कम हल्ला शक्ति समावेश हुन सक्छ। कमीकमजोरी, प्रणाली को दक्षता बावजुद पनि हराएको छ:
एक शक्तिशाली पीएसयु आवश्यक यस्तो सिस्टम को स्थापना को लागि रूपमा सदस्य, तरल ठंडा को उच्च लागत उल्लेख गरे।
डिजाइन अन्ततः उचित ठंडा सुनिश्चित, थोक र पानी ट्यांकी एकाइ कारण बरु बोझिल प्राप्त।
त्यहाँ जो नकारात्मक केही घटक को काम प्रभावित र सिस्टम एकाइ मा सर्किट हुन सक्छ संक्षेपण एक संभावना छ।
हामी केवल तरल विधि, उत्कृष्ट ठंडा कम्प्युटर प्रोसेसर विचार भने - तरल नाइट्रोजन को प्रयोग हो। विधि, पाठ्यक्रम, यो भविष्यमा स्थापना र कायम राख्न एक बजेट र अत्यन्तै जटिल छ, तर परिणाम साँच्चै योग्य छ।
प्रोसेसर को निष्क्रिय ठंडा यो तापीय ऊर्जा सबैभन्दा अप्रभावी तरिका हो। यो विधि को लाभ तथापि, एक कम हल्ला क्षमता मानिन्छ: प्रणाली, जो वास्तवमा, एक रेडियेटर, हुन्छन् "को ध्वनि reproduces।"
निष्क्रिय ठंडा विधि लामो समय को लागि प्रयोग गरिएको छ, यो राम्रो एक कम उत्पादकत्व कम्प्युटर लागि राम्रो थियो। मिति, प्रोसेसर को निष्क्रिय ठंडा व्यापक प्रयोग गरिएको छ, तर अन्य घटक लागि प्रयोग गरिन्छ - Motherboard, राम, ग्राफिक्स कार्ड सस्तो।
एयर ठंडा: प्रणाली विवरण
साधारण हावा गर्मी हटाउने ठंडा प्रकार कूलर को उज्ज्वल प्रतिनिधि एक रेडियेटर र प्रशंसक समावेश जो एक प्रोसेसर छ। हावा ठंडा लोकप्रियता मुख्यतया वफादार मूल्य निर्धारण नीति र मापदण्डहरु प्रशंसक को एक विस्तृत दायरामा श्रेय।
हावा ठंडा रेडियेटर गुणस्तर आकार र व्यास र ब्लेड को झुकन मा निर्भर गर्दछ। जब प्रशंसक वृद्धि यसको "प्रयास" कम कूलर मा सञ्चालनको परिणाम सुधार जो प्रोसेसर देखि कुशल गर्मी हटाउनका लागि आवश्यक क्रांतियों संख्या कम गर्छ।
ब्लेड गति उन्नत motherboards, connectors र सफ्टवेयर को सहायता संग नियन्त्रित छ। यसरी कूलर को प्रदर्शन निगरानी गर्न सक्छन् कि connectors को संख्या, बोर्ड मोडेल मा निर्भर गर्दछ।
BIOS सेटअप मार्फत प्रशंसक ब्लेड को समायोज्य परिक्रमा गति। कार्यक्रम अनुसार यो प्राप्त डाटा संग प्रणाली एकाइ मा तापमान वृद्धि र अनुगमन सूची पनि छ, ठंडा सिस्टम को सञ्चालन विनियमित। यस्तो सफ्टवेयर सिर्जना अक्सर motherboards को निर्माताहरु संलग्न। ती एसस पीसी प्रमाणितगर्नुहोस्, MSI CoreCenter, Abit μGuru, Gigabyte EasyTune, फक्सकन SuperStep समावेश गर्नुहोस्। साथै, थुप्रै आधुनिक भिडियो कार्डहरू सक्षम प्रशंसक को पालैपालो संख्या समायोजन गर्नुहोस्।
लाभ र हावा ठंडा को बेफाइदा मा
एयर ठंडा प्रकार प्रोसेसर यो जडान मा, बेफाइदा भन्दा बढी लाभ छ, र अन्य प्रणाली तुलना मा विशेष लोकप्रिय छ। को CPU ठंडा यस प्रकारको लाभ समावेश:
कूलर को धेरै प्रकार, प्रत्येक प्रयोगकर्ता को आवश्यकता लागि आदर्श चयन गर्न यसैले मौका;
उपकरण को सञ्चालन समयमा कम ऊर्जा खपत;
सजिलो स्थापना र हावा-ठंडा को मर्मतका।
हावा ठंडा को drawback वृद्धि हल्ला स्तर मात्र प्रशंसक प्रवेश कारण धूलो गर्न प्रक्रिया सञ्चालन घटक बढ्छ जो छ।
हावा ठंडा सिस्टम को मापदण्डहरु
जब सधैं उत्पादकको मूल्य निर्धारण नीति उत्पादनहरु गुणस्तर गर्न पत्राचार किनभने, प्राविधिक पक्ष भुक्तान गर्नुपर्छ विशेष ध्यान ठंडा कुशल प्रोसेसर लागि कूलर छनौट। तसर्थ, प्रोसेसर को ठंडा सिस्टम यसलाई निम्न आधारभूत मापदण्डहरु छ:
सकेट अनुकूलता (को Motherboard आधारमा: यस AMD वा इंटेल)।
प्रणाली को संरचनात्मक विशेषताहरु (चौडाई र संरचना को उचाइ)।
प्रकार रेडियेटर (मानक प्रकार प्रतिनिधित्व, वा संयुक्त पी-दृश्य)।
प्रशंसक ब्लेड को आयोमी विशेषताहरु।
को हल्ला उर्तानु गर्ने क्षमता (अर्को शब्दमा, प्रणाली द्वारा पुनरुत्पादन भएको हल्ला)।
गुणस्तर र हावा फ्लो को क्षमता।
वजन लक्षण (हाल प्रयोग प्रणाली थप नकारात्मक गुणस्तर असर जो कूलर, को वजन सान्दर्भिक)।
गर्मी प्रतिरोध वा गर्मी अपव्यय, केवल शीर्ष मोडेल लागि महत्त्वपूर्ण छ जो। सूचकांक 40 220 वाट देखि दायरा। उच्च मूल्य - अधिक फलदायी भएको ठंडा प्रणाली।
प्रोसेसर कूलर (को परिसर को अनुमानित घनत्व) संग tangency को बिन्दु।
एक रेडियेटर (टांका, वा प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रविधि kompressovka प्रयोग) संग सम्पर्क ट्यूब को विधि।
यी मापदण्डहरु को सबैभन्दा अन्ततः कूलर को लागत असर गर्छ। तर त्यसपछि, ब्रान्ड पनि यसको चिन्ह छोड्छ, त्यसैले पहिलो कुरा तपाईं घटक भागहरु को विशेषताहरु ध्यान गर्नुपर्छ। अन्यथा, तपाईं बिल्कुल एक पछि सञ्चालन मा बेकारी हुनेछ कि famed मोडेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
सकेट: अनुकूलता सिद्धान्त
एक प्रशंसक चयन वास्तुकला अर्थात् हुँदा, मुख्य विचार, एक सकेट प्रोसेसर संग सिस्टम अनुकूलता ठंडा। अस्पष्ट अंग्रेजी शब्द अन्तर्गत शाब्दिक विभिन्न प्रक्रियाहरू बीच संचार सक्षम बनाउँछ "जडान", "गुँडमा" ढाकिएको सफ्टवेयर इन्टरफेस हो।
यसरी, प्रत्येक प्रोसेसर को Motherboard मा एक निश्चित ठाउँ र fastenings छ। यो मतलब छ, उदाहरणका लागि, इंटेल प्रोसेसर को ठंडा छैन AMD को लागि उपयुक्त छ। इन्टेल मोडेल को यो लाइन मा एक प्रमुख र बजेट निर्णय रूपमा प्रस्तुत। i7 सीपीयू ठंडा अधिक उत्पादक (सकेट LGA 1366) उपयुक्त LGA 1156. को इंटेल आधारित अन्य प्रोसेसर लागि छ जो इंटेल कोर, को अघिल्लो संस्करण लागि भन्दा हुनुपर्छ (Pentium, Celeron, Xeon, र यति मा। N।) एक सकेट LGA 775 आवश्यक छ।
AMD यो निर्माता को मानक प्रशंसक भागहरु लागि आवश्यक छैन कि मा विशेषता छ। AMD CPU ठंडा अलग किन्न राम्रो छ।
AMD र इंटेल लागि सकेट, त्यहाँ केही मुद्दा पनि अनजान प्रयोगकर्ता पीसी बुझ्न हुनेछ दृश्य मतभेद छन्। AMD को लागि बन्धन प्रकार जसको लागि टिका संग ब्रेसहरू अपनाउँछन् एक निर्धारण फ्रेम प्रतिनिधित्व गर्दछ। इन्टेल माउन्ट - एक बोर्ड, जो मा चार तथाकथित खुट्टा। मा जहाँ प्रशंसक को वजन स्क्रू फास्टनरों प्रयोग मानक तथ्याङ्कले नाघ्यो अवस्थामा।
मात्र सकेट उपयुक्त एउटा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर छ। तपाईं पनि ध्यान को कूलर को चौडाई तथा उचाइ गर्न, प्रणाली मामला मा एक स्थान पाउन किनभने यो अन्तर्गत प्रशंसक अन्य विवरण को काम हस्तक्षेप गर्दैन भनेर तिर्न गर्नुपर्छ। भिडियो कार्ड र राम मोड्युलहरू को कूलर को गलत स्थापना गरेर हावा प्रवाह, ठंडा सट्टा यो मामला मा सम्पूर्ण संरचना थप तात्दै योगदान हुनेछ जो सामान्य आन्दोलन हस्तक्षेप हुनेछ।
रेडियेटर प्रकार: मानक, एस-प्रकार, वा एक संयोजन?
क्षण मा, प्रशंसक radiators तीन प्रकार मा आउछन्:
मानक, वा टावर दृश्य।
मानक प्रकार आधार गर्न ट्यूब समानान्तर, को प्लेट पास प्रदान गर्दछ। यी प्रशंसक लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले केहि झुकेको माथिको छन् र CPU ठंडा थप प्रभावकारी समाधान हो। मानक प्रकार को एक बेफाइदा पनि Motherboard साथ आवास पछाडि वा शीर्ष आउने कि हावा प्रवाह छ। यसरी, हावा मात्र एक सर्कल परिसंचरण बित्दै, र सीपीयू निकै गरम करना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अभाव कूलर-प्रकार बचाउनुभयो। यस्तो हीटर को सी आकारको डिजाइन प्रोसेसर सकेट वरिपरि हावा को प्रवाह बढाउँछ। तर यो यसको कमियां बिना छ: ठंडा को सी-प्रकार एउटा टावर भन्दा कम कुशल छ।
Flagship समाधान रेडियेटर एक संयुक्त रुप हो। यो विकल्प predecessors सबै लाभ जोडती, र लगभग पूर्ण प्रकार वा मानक प्रकार संग कमियां को devoid एकै समयमा।
घाँसका पातहरू को आयोमी विशेषताहरु
चौडाई, घाँसका पातहरू को लम्बाइ र झुकाव भएको ठंडा सिस्टम को सञ्चालन समयमा प्रयोग गरिने हावा को मात्रा असर गर्छ। तदनुसार, को को ब्लेड को आकार ठूलो र प्रोसेसर को ठंडा वा ल्यापटप कम्प्युटर सुधार हुनेछ भन्ने हावा फ्लो को मात्रा ठूलो। तर Indulge छैन, "बतास": प्रोसेसर लागि ठंडा व्यक्तिगत कम्प्युटर को विशेषताहरु मेल हुनुपर्छ।
हल्ला कूलर पुनरुत्पादन
यो छ - ठंडा प्रणाली निर्माताहरु लगभग कुनै पनि हालतमा सुधार गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ कि प्यारामिटर को हल्ला स्तर, reproducible कूलर। सबैभन्दा प्रयोगकर्ता अनुसार, प्रोसेसर लागि ठंडा, आदर्श, पनि छैन मात्र प्रभावकारी, तर शान्त हुनुपर्छ। तर यो मात्र सिद्धान्त छ। व्यवहार मा, हावा सिस्टम काम हुनेछ सञ्चालन समयमा हल्ला छुटकारा गर्न।
कूलर सानो आकार छ कि एकदम सन्तुष्ट प्रयोगकर्ता विशेष शक्तिशाली कम्प्युटर छैनन् कम हल्ला फेंकना। ठूलो नै प्रशंसक पर्याप्त ध्वनि स्तर यो मुद्दा विचार सिर्जना गर्नुहोस्।
हाल अधिकांश कूलर आवश्यक भएमा गर्मी को राशि गर्न, प्रतिक्रिया र तदनुसार, एउटा सक्रिय मोडमा सञ्चालन गर्ने क्षमता छ। सीपीयू ठंडा कार्यक्रम को लागि सक्रिय ठंडा लागि आवश्यकता अनुगमन को कार्य copes। यसैले, हल्ला अब स्थिर छ, तर केवल जब प्रोसेसर गहन हुन्छ। सीपीयू ठंडा लागि कार्यक्रम - सानो मोडेल र undemanding कम्प्युटर लागि सही समाधान छ।
को हल्ला स्तर समायोजन मामिलामा असर प्रकार ध्यान आवश्यक छ। बजेट, र यसैले सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प एक छ स्लाइड असर, तर avaricious दुई पटक पहिले नै अनुमान उपयोगी जीवन को आधा, यो एक haunting हल्ला फेंकना हुनेछ पुग्यो दिन्छिन्। एक राम्रो समाधान एक hydrodynamic बेयरिंग र रोलर बेयरिंग छ। तिनीहरू अब पछिल्लो र "आधा बाटो" को कार्यहरू सामना गर्न बन्द छैन।
को कूलर प्रोसेसर संग सम्पर्क को बिन्दु: सामाग्री
को ठंडा प्रणाली वातावरणमा प्रणाली एकाइ देखि अतिरिक्त गर्मी ऊर्जा उत्पादन गर्न आवश्यक छ, तर भागहरु संग सम्पर्क को बिन्दु सकेसम्म बाक्लो हुनुपर्छ। यहाँ, को ठंडा सिस्टम को एक गुणस्तर चयन लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्ड जो देखि कूलर बनेको छ सामाग्री, र यसको सतह को निर्विघ्नता को डिग्री हुनेछ। सबैभन्दा उच्च गुणस्तरीय सामाग्री (प्रयोगकर्ता र टेक्नीसियन राय लागि) एल्यूमीनियम वा तामा सिद्ध गरेका छन्। निशाना, खरोंच र अनियमितताहरु बिना - सम्पर्क को बिन्दुमा सामाग्री को सतह सकेसम्म चिल्लो हुनुपर्छ।
एक रेडियेटर संग सम्पर्क ट्यूब को विधि
एक रेडियेटर ठंडा प्रणाली संग ट्यूब को जंक्शनमा, त्यहाँ देखिने निशान हो भने, यो लागू मिलाप समाधान गर्न सम्भावना छ। हुनत टांका हाल शायद प्रयोग विधि द्वारा निर्मित यन्त्र, विश्वसनीय र टिकाउ हुन। पहिले नै रेडियेटर ट्यूब संग सम्पर्क ठाउँमा soldered एक कूलर खरिद गर्ने ग्राहक, दीर्घकालीन सिस्टम सेवा र breakdowns कमी ठंडा भन्छन्।
एक रेडियेटर संग सम्पर्क ट्यूब को बढी लोकप्रिय विधि कम गुणस्तरीय crimping छ। यो पनि व्यापक, प्रशंसक प्रयोग गरिन्छ प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रविधि प्रयोग गरेर निर्मित छन्। यस मामला मा, गर्मी डुब्नु आधार गर्मी पाइप बदलिएको छ। एक गुणस्तर उत्पादन निर्धारण गर्न, तपाईं गर्मी पाइप बीच दूरी ध्यान गर्नुपर्छ: साना यो छ, राम्रो यसलाई कूलर, गर्मी बढी वर्दी हुनेछ रूपमा चल्नेछ।
थर्मल चिल्लो: म कसरी अक्सर परिवर्तन गर्नुपर्छ?
थर्मल एक मासु भरा भयो समोसा स्थिरता विभिन्न रंग मा हुन सक्छ प्रतिनिधित्व (सेतो, खैरो काले, नीलो, नीलो)। आफैमा, यो एक ठंडा प्रभाव प्रदान गर्दैन, तर रेडियेटर ठंडा प्रणाली चिप चाँडै गर्मी सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ। सामान्य अवस्थामा, यो therebetween गठन गरिएको छ airbag, कम थर्मल चालकता छ जो।
जहाँ कूलर सीधा प्रोसेसर सम्बन्धित थर्मल चिल्लो लागू हुनुपर्छ। समय समयमा प्रतिस्थापन पदार्थ गर्नुपर्छ देखि सुकाउने सीपीयू अधिभार को डिग्री मा वृद्धि गर्न जान्छ किनभने रूपमा। प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया थर्मल पेस्ट अधिकांश आधुनिक प्रकारका इष्टतम "सेवा जीवन" एक वर्ष छ। पुरानो र विश्वसनीय ब्रान्ड लागि प्रतिस्थापन अन्तराल चार वर्ष वृद्धि भएको छ।
शायद पर्याप्त मानक समाधान?
वास्तवमा, के यो एक कूलर अलग देखि खरीद गर्न यसको लायक छ र सामान्यतया कूलिंग प्रणालीको बारेमा सोच्नु हुन्छ? धेरै प्रोसेसरहरू फ्यानको साथ तुरुन्त बिक्रीमा जान्छन्। त्यसोभए किन विवरणमा जानुहोस् र यो अलग से खरीद गर्नुहुन्छ?
कारखाना कूलर, एक नियमको रूपमा, कम उत्पादकता र शोर पुन: उत्पादन गर्न उच्च क्षमता द्वारा प्रतिष्ठित छन्। यो प्रयोगकर्ता र विशेषज्ञ दुवै द्वारा उल्लेख गरिएको छ। एकै समयमा, उच्च गुणस्तर कूलिंग प्रणाली प्रोसेसरको लामो र विपरित अपरेसनको ग्यारेन्टी हो, कम्प्युटरको सुरक्षा र सुरक्षामा आधारित छ। सही छनौट प्रोसेसरको लागि उत्तम कूलिंग हुनेछ, जुन सधैँ मानक समाधान होइन।
कम्प्यूटर प्रविधि धेरै विकासशील छ, धेरै छिटो। प्रत्येक र फेरि, अवयवहरूको नयाँ संस्करणहरू देखा पर्दछ, तिनीहरू नयाँ प्रविधिहरू र समाधानहरूको प्रयोग सुरु गर्छन्। आधुनिक निर्माताहरूले बताउँछन् कि प्रोसेसर कूलिंग प्रणाली पनि सुधारिएको हुनुपर्छ।
प्रशंसकहरूको गुणस्तर डिजाइनले केवल केही कम्पनीहरू उत्पादन गर्दछ। धेरै ब्रान्डहरू विभिन्न प्रकारका कनेक्टरहरू, तिनीहरूका मोडेलहरूको कम शोर, डिजाइनसँग अनुकूलता एक्सेल गर्ने प्रयास गर्छन्। हावा ठंडा प्रणालीहरूको शीर्ष निर्माताहरू थर्मलटेक, कूलर मालिक र एक्लोनस हुन्। यी ब्रान्डहरूको मोडेल उच्च गुणस्तरको सामग्री र एक लामो सेवा जीवनको विशेषता हो।
ATX मामला: मोडेल, सुविधाहरू, मालिकको समीक्षा
किन iTunes आईफोन देख्न गर्छ: उपाय गराउँछ
व्लादिमीर Naumov: जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
हट सलादहरू। चिकन संग गरम सलाद। कोडेक बाट हट सलाद
Capelin को व्यञ्जन
अस्पताल "वार्षिकोत्सव"। अस्पताल "वार्षिकोत्सव", Yevpatoriya। अस्पताल "वार्षिकोत्सव", ब्राट्सक
अवधारणा, भूमिका, समारोह, उत्पादन मार्केटिङ मा संरचना। उत्पादन मार्केटिङ - यो के हो? मार्केटिङ मा उत्पादन गुणस्तर - यो छ ...
यदि म एक मूर्ख छु मैले के गर्नुपर्छ? आफैलाई कसरी बुझ्न।
मानिसहरूलाई यौन abstinence: को खतरनाक